Ihe mkpofu ahịhịa: ihe ọ bụ, ebe etinye ya na ihe ọ bụ maka | Mmeghari ohuru Green
Portillo nke German | 07/10/2021 19:49 | Gburugburu
A bịa n'ịrụgharị ihe, ihe niile na -agbagwoju anya ma enwere ụdị arịa dị iche iche, anyị amaghị n'ezie ebe anyị ga -aga. Ndị ahịhịa ahịhịa ọ nwere ike mepụta ụfọdụ obi abụọ mgbe ị na -etinye ya na akpa. Nke a bụ n'ihi na ọ na -esiri ụfọdụ ndị ike ịghọta nke ọma ihe ihe ndị dị ndụ.
N'isiokwu a, anyị ga -edozi obi abụọ niile gbasara mkpofu ahịhịa, kedu ihe bụ njirimara ya na akpa ya kwesịrị itinye ya.
1 Kedu ihe bụ mkpofu ahịhịa
2 Kedu ihe mkpofu ahịhịa nwere ike ime?
3 Agba aja aja
4 Ihe ị ga -etinye n'ime akpa aja aja
Kedu ihe bụ mkpofu ahịhịa
Ihe mkpofu ihe ndị dị ndụ na -ezo aka na ihe niile na -erekasị na akụkụ nke ndụ okirikiri, ya bụ, mkpofu ahịhịa sitere na anụmanụ na nke nwere ike imebi ngwa ngwa. Anyị ga -akọwa ya nke ọma:
N'otu aka, ihe oriri fọdụrụ na ihe fọdụrụ na isi nri, nhazi ma ọ bụ usoro nkwadebe nri, dị ka walnuts fọdụrụ, nchacha ahịhịa, mkpụrụ osisi na akwụkwọ nri, akwa akwa, ọkpụkpụ azụ, shellfish azụ, nri mebiri emebi, iberibe achịcha, akwụkwọ kichin unyi (akwa nhicha ma ọ bụ akwa nhicha akwụkwọ), ihe nzacha kọfị na tii, ọkpụkpụ, ... ihe ndị ọzọ ga -abanyekwa ebe a, dị ka nkpọkọ, sawdust, mkpị eze, osisi ice cream, osisi nri ọwụwa anyanwụ, wdg.
N'aka nke ọzọ, Mpekere ubi, dị ka akwụkwọ, ahịhịa, unyi ... okooko osisi kpọnwụrụ akpọnwụ. Mpekere akwụkwọ nri akwachapụrụ, dị ka alaka ma ọ bụ ndekọ osisi, wdg.
Anyị niile ga-amarịrị ụdị arịrịọ a maka imegharị ihe, n'agbanyeghị oke ya: site n'ụlọ ndị mmadụ, ruo azụmaahịa dị iche iche (nnukwu ụlọ ahịa, ụlọ oriri na ọ, ụ, ụ, ụlọ nri nri, ebe a na-elekọta ụmụaka), ọrụ ọha (ugbo, ụlọ oriri na ọ )ụ )ụ), ruo nnukwu ụlọ ọrụ mmepụta ihe. Nri.
Kedu ihe mkpofu ahịhịa nwere ike ime?
N'iji mkpofu ihe ọkụkụ, ọ ga -ekwe omume ịme compost - ngwaahịa na -egbu egbu nke enwere ike iji ya dị ka compost ma ọ bụ ọbụna dị ka ume, adịghị emerụ ma bụrụ akụkụ nke okirikiri okike - yana ihe mkpofu. Composting bụ usoro anyị nwere ike ime n'ụlọ nke anyị. Ee, mgbe ị gụrụ ya. Ọ dị mfe: kama ịkpakọba akpa, anyị nwere ike mee ka usoro ahụ dị mfe site n'ili ozu niile n'ime ala ma ọ bụ site na iji arịa pụrụ iche akpọrọ "compost bins" iji mepụta compost organic.
Ya mere, anyị na -ewepụta compost nke anyị iji nye ubi mkpụrụ osisi ma ọ bụ ubi ihe maka ojiji nkeonwe, anyị ga -ezere isi na -adịghị mma nke na -akpata irekasị.
Mana ọ bụrụ na ịnweghị oge iji mee ya n'onwe gị, anyị na -agwa gị gbasara okirikiri nke itinye ihe ọkụkụ n'ime akpa mkpuchi aja aja. Ọ na -erute ụlọ ọrụ mmepụta ihe, ebe ikuku kwesịrị ekwesị, iru mmiri na ọnọdụ okpomọkụ ga -emekwa ka mkpofu a ghọọ compost. Ọ bụ ezie na ọ bụ usoro okike, Ọ nwere ike mee ngwa ngwa irekasị ụdị ụdị ihe mkpofu a maka iji ya nke ọma.
Site na iji ikpuru na -agwakọta mmanụ, enwere ike nweta mmanụ ọkụ sitere na isi mmalite, ya bụ, biofuels na -anọchi akụrụngwa nke fosil. N'ọkụkọba ahịhịa, a na -eji ikpuru eripịa ihe mkpofu.
Agbanyeghị, n'agbanyeghị uru ọ bara n'iwegharị ihe mkpofu ihe ọkụkụ, a ga -ejikwa ya site n'ibelata ego ewepụtara (dị ka ọtụtụ mkpofu), nke n'aka nke a pụtara ịlụ ọgụ megide mkpofu nri.
N'ihi nsonaazụ nke compost, a na -ebelata ojiji nke fatịlaịza sịntetik nke nwere mmetụta ka ukwuu na gburugburu ebe obibi ma melite ogo ala.
Site na ijigharị ihe mkpofu ahịhịa, ọ dị mfe ịnweta biogas, nke bụ ụdị isi mmalite ume ọhụrụ, iji weghachite mkpofu ahịhịa anyị na ndụ.
Site na igbochi mkpofu ahịhịa ịbanye na ebe a na -ekpofu ahịhịa ma ọ bụ ndị na -etinye ọkụ, Ọ nwere ike belata mmetụta gburugburu ebe obibi, isi na ịchekwa ike n'ihi na enwere ike imepụta ya n'ụdị biogas.
Ọrụ ugbo na -erite uru site na compost a nwere nnukwu ike nri maka uto osisi. Banyere biogas, ọ na -enyere aka nke ukwuu belata mmetọ na iji akụrụngwa ndị ọzọ n'iji ike eme ihe.
Akpa aja aja bụ ụdị akpa pụtara ọhụrụ na ọtụtụ mmadụ nwere obi abụọ maka ya. Anyị amaralarị na n'ime akpa edo edo ha na -aga arịa na plastik, akwụkwọ na kaadiboodu na -acha anụnụ anụnụ, iko na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na mkpofu ahịhịa na agba ntụ. Akpa ọhụrụ a na -ewetara ya ọtụtụ obi abụọ, mana lee, anyị ga -edozi ha niile.
N'ime akpa aja aja anyị ga -atụfu ihe mkpofu nke ihe mejupụtara ya. Nke a na -atụgharị n'ọtụtụ ihe oriri nri anyị na -emepụta. Akpịrịkpa azụ, akpịrị mkpụrụ osisi na akwụkwọ nri, iberibe nri sitere na efere, akwa akwa. Ihe mkpofu ndị a bụ ihe ọkụkụ, ya bụ, ha na -emebi onwe ha ka oge na -aga. Ụdị ihe fọdụrụnụ nwere ike iru bụrụ akụkụ nke ihe ruru 40% nke ihe niile emepụtara n'ụlọ.
Ekwesịrị iburu n'uche na ọtụtụ ihe mkpofu a na -atụba n'ime arịa ndị a ga -abụ nri, n'agbanyeghị na ịchacha na fodị osisi nwekwara ike ịwụfu. Otu njehie ọtụtụ mmadụ na -eme bụ ịwụsa mmanụ ejiri n'ime akpa a. Enweela akpa akpọrọ maka mkpofu a.
Ihe ị ga -etinye n'ime akpa aja aja
Anyị ga-edepụta ndepụta mkpofu enwere ike ịtụba n'ime agba aja aja iji hụ na ihe niile dị n'usoro ya:
Mkpụrụ osisi na akwụkwọ nri ma ọ bụ ihe foduru ha, ma nke esiri esi ma nke ndu.
Fọdụrụ ọka, mkpo ma ọ bụ akwụkwọ nri. Ọ baghị uru ma ọ bụrụ na ha esi ya ma ọ bụ na ọ bụghị, ọ ka bụ nri na, ya mere, ihe na-emebi emebi.
Achịcha, achịcha dị iche iche na kuki anyị ahapụla ma ọ bụ nke mebiri emebi na anyị achọghị iri ya.
Site na mkpụrụ osisi anyị na-atụfukwa ọkpụkpụ, mkpụrụ, shells na mkpụrụ akụ niile na-adịghị mma ma ọ bụ na anyị ahapụla.
Ihe ọ bụla nwere ike mebie emebi dị ka akwụkwọ kichin ejiri, akwa nhicha, kọfị ka na -adị (ọ bụghị okpu mkpuchi aluminom niile, naanị ahịhịa), akpa nke infusions na -abịa, kọks karama, wdg.
Runkwacha ahịhịa, osisi, akwụkwọ osisi, ifuru, wdg.
Sawdust, akwa shells, anụ, azụ na azụ mmiri.
Enwere m olile anya na site na ozi a, ị ga -amụtakwu gbasara mkpofu ahịhịa na njirimara ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Green » Gburugburu » Nri ahịhịa
Ebumnuche mmepe na-adịgide adịgide